XOG CUSUB: Yusuf Garaad oo war culus ka soo saaray Xaaladda Galmudug, ‘‘Ahlu Sunna yaan loo darsan!” | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG CUSUB: Yusuf Garaad oo war culus ka soo saaray Xaaladda Galmudug,...
XOG CUSUB: Yusuf Garaad oo war culus ka soo saaray Xaaladda Galmudug, ‘‘Ahlu Sunna yaan loo darsan!”
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar ayaa sheegay inay Ahlu Sunna sabab u aheyd hormaru la’aanta ka taagan deegaanada Galmudug, isagoo taas sabab uga dhigay isfaham la’aan kala dhexeysay Federaalka oo aan hal Dowlad ku koobnayn.
Wuxuu Dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay sugto amniga deegaanada ay kala wareegtay Ahlu Sunna, isagoo ku baaqay inaan loo darsan Ahlu Sunna.
“Ahlu Sunna isfaham la’aan kala dhexeysay Federaalka oo aan hal Dowlad ku koobnayn ayaa wiiqday horumarka degaanka iyo Dowladnimada Galmudug.
Hadda isbeddel kasta oo degaankaas ka dhacaya laba ayaa aniga iigulu muhiimsan, In aan dhiig ku daadan marka isbeddelku dhacayo iyo waliba ka dib isbeddelka dartiis.
Dhinaca kale, Ahlu Sunna cidina kuma wehlin ka saaridda deegaanka iyo ka daafaca Al-Shabaab. Iyagu garan waaye tab ay libintooda uga dhigaan mid dadka deegaanku uu wada leeyahay iyaguna ay horseed ka yihiin.
Laakiin, Dowladda Federaalka oo hadda Galmudug toos ula wareegtay iyada ayay mas’uuliyaddu saaran tahay. Kama hadlayo doorasho iyo siyaasad. Waxaan ka hadlayaa amni iyo Daafaca degaanka. Yaan loo darsan Ahlu Sunna.” Ayuu yiri Yuusuf Garaad Cumar.
dhaleeceeyay Ahlu Sunna
Wasiir hore ee arrimaha dibaddda